E-News Nepali || Fast and Accuracy » बस दुर्घटनामा आमाको ज्यान गयो, पिता समेत फरार भएपछि ९ महिने शिशुको बिचल्ली !
बस दुर्घटनामा आमाको ज्यान गयो, पिता समेत फरार भएपछि ९ महिने शिशुको बिचल्ली !
सिन्धुपाल्चोक आइतबार भएको सवारी दुर्घटनामा परेकी ९ महिने काखे शिशु (छोरा) को बिचल्ली भएको छ । बा२ख ४४६८ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा उनकी आमा सुनिता तामाङको निधन र उनका पिता सुमन तामाङ फरार भएपछि बिचल्ली भएको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
उनै सुमनले चलाएको सो बस सुनकोसी गाउँपालिकाको ६ किलो भन्ने ठाउँमा दुर्घटनामा परेको थियो ।
जुन दुर्घटनामा १५ जनाको ज्यान गएको थियो । दुर्घटनामा घाइते भएका शिशुलाई अन्य घाइतेसँगै अस्पताल लगिएको थियो । खाडिचौरस्थित सिन्धु सदाबहार अस्पतालको संरक्षणमा रहेका शिशुको कसैले पनि दाबी नगरेपछि प्रहरीले उनको अभिभावक खोजी गरेको थियो । अलपत्र परेका शिशुको आफन्त खोजी गर्ने क्रममै चालकको पहिचान खुलेको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरीका अनुसार शिशु तन्दुरुस्त छन् । यति ठूलो दुर्घटनामा उनलाई सामान्य पनि चोटपटक लागेको छैन । उनी अस्पतालका महिला स्वाथ्यकर्मीसँग बसिरहेका छन् । शिशु र मृतक सुनिताका घर र माइती पक्षका आफन्त प्रहरीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आइसकेका छन् । टेलिफोनमा आउँछु भने पनि शिशुको जिम्मा लिन र मृतकको शव बुझ्न सोमबार साँझसम्म कोही आफन्त आएका थिएनन् । मृतक सुनिताको शव बाह्रबिसेस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा छ ।
प्रकाशित मिति १ पुष २०७६, मंगलवार ०३:४४